Bhutan: tanin'ny dragona kotroka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Bhutan: tanin'ny dragona kotroka
Seranam-piaramanidina Paro - Sary © Rita Payne
Ny Mpanjakan'ny fanjakan'i Himalaya any Bhutan dia nanao lohateny lehibe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena rehefa nanambara izy fa ny fahasambarana nasionaly no tanjon'ny governemanta ary tsy tokony horaisina ho fandrefesana fahombiazana fotsiny ny toekarena. Ny mpanjaka amin'izao fotoana izao, toy ny razambeny, dia niezaka hitazona ny fifandanjana eo amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana raha mitahiry ny kolontsaina sy ny lova tokana an'ny fanjakana.
Ny hatsaran'ny Bhutan, izay ny anarany tany am-boalohany, Druk Yul, midika hoe Land of the Thunder Dragon, dia miharihary rehefa manidina ao amin'ny fanjakana. Ny fiaramanidina dia nidina namakivaky ny rahona teny ambonin'ny tampon'ny tendrombohitra mahavariana mba hipetraka amin'ny seranam-piaramanidina Paro. Tsy toy ny terminal iraisam-pirenena manjavozavo sy manara-penitra fa ny firafitra sy ny endriny dia mifototra amin'ny fomba Bhutanese misy tafo hazo vita sokitra sy andry ary rindrina misy temotra bodista amin'ny rindrina. Tashi Namgay Resort, izay ivon-toeranay indrindra nandritra ny fijanonanay, dia mifanohitra amin'ny seranam-piaramanidina. Tahaka ny ankamaroan'ny tranobe any Bhutan, ny trano fandraisam-bahiny koa dia mitaona aingam-panahy avy amin'ny maritrano nentim-paharazana eo an-toerana sady manome ny fitaovana ilaina rehetra antenaina amin'ny trano mihaja.
Tiger's Nest sy zavatra manintona hafa
Paro dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny lohasaha Bhutan. Nifoha tamin'ny andro feno voalohany tamin'ny fitsidihanay ny feon'ilay renirano mikoriana haingana izay mandeha eo am-pototry ny fitambaran-trano fandraisam-bahiny avy eo amin'ny loharanony any an-tendrombohitra Himalaya. Nitsena anay ny mpitarika anay, Namgay, ary ny mpamily tanora, Benjoy, izay lasa mpiara-mitory azo antoka sy nampahafantarina anay nandritra ny fitsidihanay.
Ny entana voalohany tao amin'ny fandaharanay dia mety ho tena sarotra indrindra. Ny tanjonay dia ny hianika ny monasiteran'i Paro Taktsang, fantatry ny besinimaro hoe Tiger's Nest, izay miraikitra eo amoron'ny hantsana mideza. Mampalahelo fa tsy maintsy nilavo lefona aho rehefa tsy latsaka ny ampahefatry ny lalana intsony izahay, ka nanaiky fa tsy ampy fahaizana fotsiny aho hamita ilay dia. Ny vadiko, izay vita amin'ny zavatra henjana kokoa, dia nanamarin-tena tamin'ny fiakarany tany amin'ny monasitera ary tamim-pifaliana noho ireo fomba fijery mahavariana. Ny monasitera dia inoana fa eo amin'ny toerana iray izay nisaintsainin'i Guru Rinpoche tao anaty lava-bato tamin'ny taonjato faha-8. Izy io dia hajaina ho iray amin'ireo tranonkala bodista masina indrindra tsy any Bhutan ihany fa amin'ny faritra Himalaya manontolo.
Fiara folo minitra avy eo afovoan'i Paro dia Kyichu Lhakhang, tempoly tamin'ny taonjato fahafito. Ao amin'ny distrikan'i Paro ihany koa i Ta Dzong (Museum Nasionaly) iray amin'ireo toerana tsara indrindra hianarana momba ny fivavahan'ny Bhutan, fomba amam-panao ary zavakanto nentim-paharazana. Avy eto dia misy làlana mankany Rinpung Dzong monasitera lehibe sy trano mimanda izay misy ny Monastic Body ao amin'ny distrika ary koa ny biraon'ny governemanta Paro. Avy tany Paro dia nitondra fiara nankany Thimphu renivohitra izahay, ary tao no nanamarihana tao amin'ny Hotely Phuntso Hotel malaza amin'ny lalan'ny fizahan-tany.
Thimphu hatrany Punakha
Ny marainan'ny andro maraina dia niainga avy tao Thimphu izahay nankany Punakha namakivaky ny làlan'i Dochula (3,100m) izay nisedra ny mpamilinay, Benjoy, satria rakotry ny oram-be tampoka sy zavona mahery ny ampahan-dalana. Rehefa nadio ny lanitra dia nahazo valisoa tamim-pahagagana izahay nahita ny atsinanana atsinanana Himalaya anisan'izany ny tampon'ny Bhutan.
Ny mari-pamantarana lehibe dia ny Punakha Dzong trano mimanda manan-tantara naorin'i Shabdrung Ngawang Namgyel tamin'ny 1637 ary miorina eo amin'ny fihaonan'i Pho Chu sy Mo Chu Rivers. Punakha no renivohitr'i Bhutan hatramin'ny 1955 ary mbola fonenan'ny ririnina an'i Je Khenpo, ny Chief Abbot. Ilay trano mimanda, izay nitana andraikitra lehibe teo amin'ny fiainam-pivavahana sy fiainam-pirenena teto amin'ny firenena, dia potipotehina tamin'ny dingana maro tamin'ny tantarany noho ny afo, tondra-drano ary horohoron-tany ary naverina tamin'ny laoniny tanteraka teo ambany fitarihan'ny Mpanjaka ankehitriny.
Betsaka ny angano sy angano any Bhutan. Ny fanjakana dia tototry ny tempoly sy ny toerana masina natokana ho an'ny andriamanitra, moanina ary olona ara-pivavahana izay nomena fahefana manokana hanasitranana sy hanome fitahiana manokana. Nandeha fitsangatsanganana fohy tany amin'ny tempoly natokana ho an'i Drukpa Kunley izahay, moanina manana laza mahaliana. Nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "ilay Madama Masin'i Bhutan" izy noho ny fiainany maro loko ary fantatra fa nanana 'filahiana majika'; tsy mahagaga raha ampifandraisina amin'ny fahavokarana ny tempoly. Ireo mpivady tsy manan-janaka dia mandeha lavitra mba hanolotra vavaka ho azy ary aseho ao amin'ny tempolin'ireo izay mino fa voavaly ny vavak'izy ireo.
Thimphu mitsidika an'i Paro
Ny programa tamin'ny fiverenanay tany Thimphu dia nahitana ny fitsidihana ny Ivon-toeran'ny fanafody nentim-paharazana izay ahafahan'ny olona mianatra momba ny akora indizeny ampiasaina amin'ny fanomanana vokatra ara-pahasalamana isan-karazany. Nanohy ny tranombakoka Folk and Heritage Museum izahay, izay mampiseho fitaovana ampiasain'ny tantsaha Bhutanese nentim-paharazana ary manome ny fiainana ireo fiainana sarotra izay mbola iainan'izy ireo any amin'ny faritra tsy dia mandroso amin'ilay fanjakana. Eo akaiky eo ny Sekolin'ny sary hoso-doko izay mana-pahaizana manokana amin'ny sary hosodoko, sary sokitra ary sokitra hazo
Ny harivan'ny andro dia nitsidika an'i Great Buddha Dordenma izahay, sarivongana goavambe an'ny Buddha nipetraka teo an-tampon'ny havoana iray mitazana an'i Thimphu. Saika 52 metatra ny haavony (168 metatra) dia iray amin'ireo sarivongana lehibe indrindra sy avo indrindra eran'izao tontolo izao an'ny Buddha. Nahagaga ny fahitan'i Thimphu etsy ambany. Toerana mahaliana hafa ny atrikasa famokarana taratasy vita tanana ary ny National Handicraft Emporium, izay araky ny anarany, dia zava-tsarobidin'ny vokatra vita ao Bhutan
Na dia eo anelanelan'ny mpifanila vodirindrina aminy lehibe, India sy Shina i Bhutan, dia nahomby tamin'ny fiarovana ny fiteny, ny kolotsaina ary ny fomba amam-panaony. Miaram-piavonana mafy ny fiarahamoniny. Na dia patriarika ara-pianakaviana aza ny rafitry ny fianakaviana, dia mizara roa ny zanaka sy ny zanaka vavy. Ny fiteny ofisialin'ny fanjakana dia Dzongkha, tenim-paritra mitovy amin'ny Tibetana. Ny tetiandro Bhutanese dia mifototra amin'ny rafitra Tibetana izay avy amin'ny tsingerim-bolana Sinoa.
Ny lehilahy sy ny vehivavy dia manao ny akanjom-pireneny na dia mahita olona maro manao akanjo tandrefana any amin'ny tanàna sy tanàna aza izy ireo. Ny lehilahy toa mipoitra amin'ny akanjony amin'ny fehikibo mifatotra amin'ny andilany. Akanjo lava-voditongotra vita amin'ny lamba maroloko ireo vehivavy ary mitafy firavaka miavaka vita amin'ny haran-dranomasina, perla, turquoise ary vato soa agata sarobidy izay antsoin'ny Bhutanese hoe "ranomason'andriamanitra".
Tsotra sy mahasalama ny sakafo Bhutanese na dia mety tsy mifanaraka amin'ny tsiron'ny tsirairay aza. Ny vidin'ny nentim-paharazana dia misy lasopy tsaramaso sy fromazy, henan-kisoa na henan'omby miaraka amin'ny lovia legioma misy masaka miaraka amin'ny zava-maniry eo an-toerana. Ny olona iray dia afaka mahazo sakafo eo an-toerana amin'ny vidiny antonony any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana nentim-paharazana ary mihinana amin'ny trano tsy miankina voafantina izay nisoratra anarana tamin'ny masoivohon'ny dia. Ho an'ireo mpizahatany izay maniry hifikitra amin'ny saran-dàlana mahazatra kokoa, hotely iraisam-pirenena marobe no manolotra sakafo indianina, andrefana ary iraisam-pirenena hafa.
Ny fizahan-tany dia loharanom-bola lehibe
Araka ny nomarihina teo aloha, ny Mpanjaka dia mailo amin'ny fiarovana ny fomban-drazana sy ny vakoky ny firenena amin'ny fahasimbana ateraky ny fizahan-tany ara-barotra marobe. Bhutan dia firenena voahidy tany tsy misy afa-tsy olona 700,000, voafetra ny safidy azo aondrana na indostrialy noho ny tany be tendrombohitra. Ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena dia mahantra, ary 12% no miaina ambanin'ny tsipika fahantrana iraisam-pirenena. Ny fizahantany no iray amin'ireo loharanom-bola lehibe ahazoana an'i Bhutan. Ny mpizahatany dia takiana amin'ny 200 $ farafahakeliny isan'olona isan'andro manomboka amin'ny Desambra - Febroary, ary Jona - Aogositra ary $ 250 isan'olona isan'andro manomboka ny volana martsa - mey ary septambra - novambra. Ny karana, ny bangladesy ary ny maldiviana dia tsy manan-kery amin'izany fiampangana isan'andro izany. Misy ihany koa ny fihenam-bidy azo omena, indrindra ho an'ny mpianatra sy ny ankizy 5 - 12. Ity politika ity dia niteraka tsikera avy amin'ny sasany noho ny fanavakavahana ny ambany toerana. Saingy, noho ny vola miditra amin'ny fizahan-tany no ahafahan'ny mponin'i Bhutan mankafy fikarakarana ara-pahasalamana maimaim-poana, fampianarana maimaim-poana, fanampiana ny fahantrana ary fotodrafitrasa.
Bhutan dia voatahy miaraka amin'ny harena voajanahary sy tandindona mahavariana manomboka amin'ny tendrombohitra Himalaya mitafy lanezy sy glaciers hatramin'ny ala mikitroka. Maherin'ny roa ampahatelon'ny Bhutan no rakotra ala honenan'ireo vorona, biby ary vorona vahiny. Ny fanjakana dia manana valan-javaboary marobe, iray amin'ireo notsidihina indrindra dia ny Manas Game Sanctuary eo amoron'ny reniranon'i Manas izay mamorona sisintany miaraka amin'ny fanjakan'ny Assam any India. Eto no ahitanao ilay rhino manan-tandroka tandindomin-doza, elefanta, tigra, buffalo, karazana serfa maro ary ny langur volamena, rajako kely izay tsy manam-paharoa amin'ity faritra ity. Betsaka ny karazam-bibidia nanjary lany tamingana tany amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao vokatry ny fanjonoana na fahaverezan'ny toeram-ponenana noho ny fivoaran'ny tanàn-dehibe, Bhutan dia nanokana loharanon-karena be dia be hiarovana ny fiainam-bibidiny.
Fiaingana avy any Bhutan
Nandritra ny fotoana fohy nijanonanay dia tsy nahita afa-tsy ampahany kely tamin'ny zavatra atolotry ny fanjakana izahay. Ny toetr'andro indray dia nanjary anton-javatra rehefa niomana ny handao an'i Bhutan izahay. Nandany alina nitebiteby tany Paro izahay satria ny rahona nanarona ny tendrombohitra ary ny oram-be nivatra nandritra ny alina. Gaga izahay fa nampahafantatra anay tsy an-kijanona ilay mpandray olona tao amin'ny hotely fa tsy foana ny sidina noho ny toetr'andro ratsy. Raha sendra mitsiky amintsika ireo andriamanitra dia mijanona ny orana ary afaka nanidina izahay araka ny fandaharam-potoana. Tao anatin'ny adiny iray monja dia niverina tao amin'ny renivohitra Nepalm, Kathmandu izahay, ary nahatsiaro ho nofinofy ny fitsidihanay an'i Bhutan. Tsy mahagaga raha ny fanadihadiana natao tao amin'ny Lonely Planet dia nametraka an'i Bhutan ho eo an-tampon'ny lisitr'ireo firenena hitsidihana an'izao tontolo izao. Miketrika ny governemanta mba hitazomana ny kolontsaina voatahiry tsara ao Bhutan manoloana ny fivoarana sy ny fanavaozana haingana. Tsy afaka manantena fotsiny ny olona fa tsy ho simban'ny fanafihan'ny mpizahatany ny fisarihana an'ity fanjakana majika ity satria miparitaka ny momba ny hatsarany miavaka.
Tashi Namgay Resort, Paro - Sary © Rita Payne
Fahitana ny monasiteran'ny Tiger's Nest - Sary © Rita Payne
Tempolin'i Kyichu Lhakhang - Sary © Rita Payne
Punakha Dzong - Sary © Geoffrey Payne
Sakafo Bhutanese nentim-paharazana - Sary © Rita Payne
Great Buddha Dordenma - Sary © Rita Payne
Tany Bhutanese - Sary © Rita Payne
Jamaica hampiasa vola $ 66 tapitrisa ao anatin'ny 3 taona ho avy amin'ny fampandrosoana ny fizahantany momba ny fahasalamana sy fahasalamana
Ny mpandraharaha fizahan-tany Kenya UNIGLOBE Let's Go Travel dia mahazo mari-pahaizana manerantany ho an'ny fampiharana maharitra